Igcine ukubuyekezwa: Juni. 10 2018 | 2 imiz ufunde
The eyishumi edlule oboné amadoda nabesifazane abaningi kungakhathalekile ubudala babo ziphendukela ukuphola online. Ngokombiko ucwaningo olwenziwa e July, 2014, izwe manje 41,250,000 Abantu abaye bazama ukuphola online at esithile ekuphileni kwabo.
Uma ucabangela labantu wamanje we US 361.1 million, kungashiwo ukuthi umqondo ukuphola online wakwazi woo ngaphezu 11% abantu ezweni. Ngakho, yini lezi 11% Abantu ukukhuluma lapho behlangabezana abashade nabo abangahle online?
Ingxoxo Empeleni uqala kakhulu phambi kwabantu ukuhlangabezana nomunye an online ukuphola site. Ukuze wandise amathuba akho okuthola umlingani ilungelo, kumele ube profile ephelele, a profile okhuluma ngokwakho. It kufanele baphathe isihloko killer, izithombe zakho umhlabeleli futhi abanye ulwazi ofuna abantu bazi ngaphambi empeleni ukubonisa isithakazelo uxoxa nawe. Uma une profile ephelele, amathuba akho ukuhlangabezana umuntu ophelele online kuyoba kakhulu ephakeme.
Manje uye abayithandayo ukukhuluma umbuzo yilokho izihloko engcono nabanye kukhona. Nazi iziphakamiso ezimbalwa ukuphola online ingxoxo izihloko.
Kunezindawo ezimbalwa abangathandi kunconywa. Ngakho, ungaqala ingxoxo by complimenting omunye umuntu. Indlela ekahle seluzoqala ngokudumisa izinqumo ezenziwa ngaye / yakhe. Ngokwesibonelo, ungakwazi sidumise choice umuntu ukudla, ukunambitheka umculo, njll. Lokhu kuzokwenza umlingani wakho ezingase zibe uqonde ukuthi empeleni usuke wafaka eziningi umzamo ukufunda ngokusebenzisa kwakhe / profile yakhe.
Ukufunda online ukuphola profile of kumuntu kuyokunika ukwazi ngendaba / yena onesithakazelo. From kubo, Khetha izihloko futhi kuyo futhi njengoba ingxoxo iqhubekela phambili, qala ukukhuluma phezu kwabo. Lokhu kuyokwenza ingxoxo more elithakazelisayo for zombili izinhlangothi. Uma ungahlanganyeli yiphi intshisekelo umuntu othile, yena / yona mhlawumbe hhayi umuntu ilungelo usuku.
Njengoba uqala ukuzizwa ukhululekile ukuxoxa nomuntu, ungaqala ukuxoxa ngempilo. Kungaba izingxoxo ngezinto ozenzile empilweni, Izinhloso yakho yokuphila, uhlobo ebuntwaneni wena kwadingeka, njalo njalo. Kancane kancane njengoba omunye umuntu uqala kokuphendula ngokuhlanganyela izindaba impilo yakhe /, uzothola ingxoxo ngokuya futhi mnandi. Okungcono, akufanele uqale ukukhuluma ngobudlelwano esidlule ngesikhathi kuqala ingxoxo une; izihloko ezinjalo kufanele kuxoxwe once uqale nobabili ukuqonda nomunye kahle.
Iningi daters inthanethi ngikuthanda sihlangana nabantu abangakwazi ukwenza kubo ukuhleka; lokhu umi kungakhathaliseki ubulili basonta weqiniso. Ngakho, ukwabelana ambalwa behlakaniphile-ethwala eyodwa kanye namahlaya yindlela enhle yokwenza ingxoxo more ingqondo. Ungalokothi uzame ukuba cheesy nge amahlaya akho, futhi igweme fun of the umuntu uxoxa.
Online dating ingxoxo izihloko bavame ziyahlukahluka kuye ukunambitheka, nesizinda semfundo kanye age of abantu. Ngakho, lapho ekhetha undabuzekwayo ngesikhathi i date online Kumelwe ugcine lezi zici.
New online ukuphola scene? Well, kukholwe noma ungakukholwa, ukuphola online kungaba…
Lapho Notre Dame sika football inkanyezi Manti Te'o wahlangana nentombi yakhe ku-Twitter akalokothi ngisho…
Ingabe Online Dating For Losers?
Kukhona ubhubhane kwenzekani emphakathini abekelwe ngokushesha zanamuhla — thina sonke…